Masiyiwa wants Zimbabwe to start pricing in rand instead of RTGS dollars » ZOOM Zimbabwe News
April 19, 2019 356 No comment
FOUNDER and Executive Chairman of Econet, Strive Masiyiwa, wants Zimbabwe to start pricing its goods in rand instead of RTGS dollars, a move that he says could introduce some price stability.
Masiyiwa, whose Econet is one of the biggest companies in Zimbabwe, said this while reacting to news that the price of bread almost doubled to RTGS$3.50 from $2 this week.
“The people who pay for a lot of goods are Zimbabweans living in South Africa, through their remittances. The cost structure – labor and goods – in Zimbabwe is distorted by the arbitrage of the United States dollar as a currency of settlement for rand imports,” Masiyiwa said on his social media page.
President Emmerson Mnangagwa’s government does not need to join the Rand Monetary Union to make the switch, Masiyiwa insists.
Masiyiwa said if every business in Zimbabwe quoted goods and services in rand for their customers, “it would go some way to eliminating the dollar arbitrage”.
More on ZOOMZimbabwe... Zim footballer Walter Musona arrested in SA
Masiyiwa, who lives between South Africa and the United Kingdom, says over a million Zimbabweans living in South Africa can demand price parity in the rand. He predicts the switch to the rand as the main currency of trade would “improve the quality of life for our families and also improve general liquidity.”
Zimbabwe on February 22 introduced the new currency, which has since weakened about 18% versus the dollar.
The annual inflation rate has risen to its highest levels since a hyperinflation episode in 2008.
Tags: rand RTGS dollar South Africa Strive Masiyiwa
CAF releases list of referees for 2019 AFCON, no one from Zimbabwe
It’s right time to engage Zimbabwe: EU
By zoom April 2, 2019
Palpable tensions in Zimbabwe as major currency announcement likely
No weapons were stolen from State armoury: Matemadanda
By zoom February 8, 2019